Xubin ka mid ah xukuumadda RW Kheyre oo xilkii iska casilay – XOGMAAL.COM
Xubin ka mid ah xukuumadda RW Kheyre oo xilkii iska casilay
Maalmahan dambe waxaa jiray is qab qabsi mararka qaar soo kala dhexgala Wasiirada Wasaaradaha Xukuumadda iyo masuuliyiinta ka hoos shaqeeya
By Soomaaliya	 Last updated Aug 9, 2018
Xoghayihii joogtada ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Macalin aya iska casilay xilkii uu hayay.
Maxamed Cumar ayaa sheegay inuu isku casilay xaalado adag oo u saamixi waayey inuu sii gutto shaqadii uu u hayey wasaaradda Gargaarka, Isagoona xusay inay kala aragti duwanaansho u dhaxaysay isaga iyo Wasiirka Wasaaradda Xamza Saciid Xamza.
Maamlo ka hor ayay aheyd markii la xiray Daahir Maxamed Nuur oo ahaa Agaasimihii Waaxda Dib u Dejinta Barakacayaasha ee wasaaradaasi oo haatan ku jira xabsi kadib markii dawladda Soomaaliya ku eedaysay xatooyo xoolo dadweyne.
Soomaalida Kanada ayaa diidmo kala hor yimid go’aan ka soo baxay Dowladda Soomaaliya
Maxaa ka jira iney is hor fadhiyaan Liyuu Boolis iyo Millatariga Itoobiya?
Ganacsatada Qaadka Kenya oo mowqif adag ka qaatay muranka u dhexeeya Kenya iyo…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay Xiisada u dhaxaysa Kenya iyo…